Bee Ngwaahịa: Superfoods mbụ ahụ
The umeala mmanụ aṅụ anu bụ otu n'ime uwa kasị mkpa ntule. Aṅụ ndị na oké mkpa n'ihi na mmepụta nke nri na anyị bụ ụmụ mmadụ na-eri n'ihi na ha mịa osisi dị ka ndị ha na-nectar si okooko osisi. Enweghị aṅụ anyị ga-a ike oge na-eto eto ka ukwuu nke anyị nri.
E wezụga inyere anyị na anyị na-akọ ugbo mkpa, aṅụ ka ọtụtụ ngwaahịa na anyị nwere ike ubi na-eji. Ndị a na-achịkọta na iji ha na ọtụtụ puku afọ na iji ha na ihe-oriri, ekpomeekpo, na ọgwụ. Taa, sayensị ọgbara ọhụrụ na-akụta ruo ihe anyị na-mara: anu ngwaahịa nwere oké ọgwụ na ekwukwa n'akwụkwọ uru.
Mmanụ a .ụ
Honey bụ ndị mbụ na kacha doro anya ngwaahịa na-echeta mgbe na-eche banyere anu ngwaahịa. Ọ bụ ngwa ngwa dị na nri na-echekwa na ọtụtụ ndị na-eji ya dị ka a sweetener na ebe nke a nụchara anụcha sugar. Honey bụ nri na aṅụ mee site obon nectar si okooko osisi. Ha atụgharị nectar n'ime mmanụ aṅụ site regurgitating ọ na-ekwe ka ọ ikusi itinye uche na shuga n'ókè na-eme ka ya isi Efrata. Ke adianade sugar, mmanụ aṅụ dere Chọpụta ichekwa vitamin, minerals, eriri, protein, na ndị ọzọ na bekee.
The flavor nke mmanụ aṅụ bụ pụrụ iche na a mara mma ọzọ ka ndị ọzọ sugars. Ma mmanụ aṅụ si uru karịrị nnọọ flavor na uto. Honey nwere ọtụtụ ike uru, ma dị ka ihe i nwere ike iri na dị ka a Nde ọgwụ. -Maara Otú ọ dị, na mmanụ aṅụ na ị na-eji kwesịrị ndu na unprocessed.
Antioxidants . Honey bụ ọgaranya antioxidants, nke enyere ịrụzi mebiri ka anyị na ozu site na gburugburu ebe obibi nsị. The darker na mmanụ aṅụ, na ihe antioxidants ugbu a na ya.
Allergy enyemaka . Raw na unprocessed mmanụ aṅụ dere allergens si na gburugburu ebe obibi, gụnyere pollens, ebu, na ájá. Ọ bụrụ na ị na-eri a ntakịrị unfiltered mmanụ aṅụ na e mepụtara na mpaghara gị ebe ọ bụla ụbọchị, ị ga-ahụ na ị nwere onwe gị anataghi mgbaàmà. Site dosing na allergens ị rụpụta a eke ọgụ ha.
Digestive ahụ ike . Honey e gosiri ka mma mgbaze na ụzọ abụọ. Na elu eriri afọ tract na antibacterial Njirimara nke mmanụ aṅụ nwere ike belata etoju nke bacteria na-eme ka ọnyá. Na colon mmanụ aṅụ na-enye probiotics inyere mgbaze.
Agwọ ọnyá . Dị ka a Nde ude, mmanụ aṅụ nwere ike iji na-emeso ọnyá. Ọ nwere ogwu mgbochi mmetụta na-eme ọnyá dị ọcha ka ha nwere ike ịgwọ ndị ọzọ ngwa ngwa.
Mgbochi mkpali mmetụta. Nnukwu mbufụt bụ eke akụkụ nke na-agwọ ọrịa, ma ala-ọkwa, ala ala mbufụt na anwụ ka ọtụtụ ndị America n'ihi na ndị ogbenye na-eri na-emebi ihe. Honey mara iji belata-adịghị ala ala mbufụt ke akwara na-eme ka ọrịa obi na ọrịa. Ọ na-stabilizes ruru n'etiti ezi ihe na ihe ọjọọ cholesterol.
Ụkwara suppression. Oge ọzọ i nwere a oyi tinye a teaspoon mmanụ aṅụ na a cup of na-ekpo ọkụ tii. Honey suppresses a ụkwara na e nwekwara ụfọdụ na-egosi na ọ pụrụ inye aka na-agwọ a oyi na belata ya oge.
Pịnye-2 Diabetes. N'ihi na ndị mmadụ na ụdị-2-arịa ọrịa shuga, ọ dị mkpa ka na-erikpukwa n'ọbara na sugar. Honey a tọhapụrụ ihe nwayọọ nwayọọ n'ime n'ọbara karịa nụchara anụcha sugar, nke na-eme ya a mma maka ndị ọrịa mamịrị.
Bee pollen bụ dị iche iche site na mmanụ aṅụ. Ọ bụ pollen na aṅụ anakọtara site na okooko osisi na-juru n'ọnụ n'ime obere nsogbu dị iche iche. N'ihi na aṅụ, na pollen bọọlụ na-echekwara na ekwo Ekwo na-eji dị ka a bụ isi iyi nke protein. Ka ha na abịa pollen n'ime ekwo Ekwo ndị ọzọ mmiri na-atụkwasịkwara ya gụnyere enzymes si anu si asu, bacteria, na nectar.
Maka ụmụ mmadụ, anu pollen bụ a ekwukwa n'akwụkwọ powerhouse na e nwere ọtụtụ ihe na-eji ya dị ka a akụkụ nke gị mgbe nri. Ọ dị mkpa ịmara na anu pollen na-adịghị hụrụ ndị ọzọ anu ngwaahịa dị ka mmanụ aṅụ na eze jelii. Ọzọkwa lezie anya nke anu pollen ngwaahịa na nwekwara. A na-adịghị eke ngwaahịa na pụrụ ọbụna ịbụ na-emerụ.
Complete oriri na-edozi. Bee pollen nwere ihe nile nke nri anyị bụ ụmụ mmadụ mkpa na ya obere nsogbu dị iche iche. Ọ nwere protein, carbohydrates, abụba, antioxidants, vitamin, na mineral. Ọ bụ ihe zuru ezu nri.
Ibu akara. Bee pollen a chọpụtara na inyere ndị mmadụ aka ida na jikwaa ibu mgbe eji dị ka a emeju a ike nri na mmega. O nwere ike inyere site na-akpali akpali ahụ metabolism.
Digestive ahụ ike. Research egosiwo na-eri anu pollen nwere ike mma gị na-agbari nri ahụ ike. Nke a nwere ike kọwara site n'eziokwu ahụ bụ na ọ na e dere eriri nakwa dị ka probiotics.
Anaemia. Ụkọ ọbara ọrịa nyere anu pollen nwetara ihe na-abawanye na mkpụrụ ndụ ọbara uhie ke n'ọbara. Gịnị mere nke a mere na-adịghị aghọta, ma anu pollen supplementation yiri inyere ndị mmadụ aka na anaemia.
Blood cholesterol etoju. Bee pollen ka a emeju nwekwara e gosiri mezie etoju nke cholesterol ke iyịp. Ọ na-eme na ọkwa nke ọma cholesterol (HDL) ịgbago, mgbe ndị na-etoju nke ọjọọ cholesterol (LDL) na-aga ala.
Cancer mgbochi. Na ọmụmụ ụmụ oke, anu pollen na ihe oriri gbochie guzobe etuto ahụ.
Ekliziastis. Ọtụtụ ọmụmụ gosiri na anu pollen na-eme ka slowing ụfọdụ ịka nká Filiks. O yiri ka ibe ebe nchekwa, na-akpali metabolism, na-ewusi obi na akwara, na-enye nri na ọtụtụ ndị na-enweghị ka ha na nká.
Ọ bụghị ka e mgbagwoju anya na mmanụ aṅụ, nke na-azụ na onye ọrụ aṅụ, eze jelii bụ nri maka queen anu, nakwa dị ka erùrù na a ógbè. Royal jelii bụ otu n'ime ihe maka yie a nwa ahuhu n'ime a queen kama a ọrụ anu. The mejupụtara nke eze jelii-agụnye mmiri, protein, sugar, a obere bit nke abụba, vitamin, antioxidants, ọgwụ nje ihe, Chọpụta minerals, na enzymes. Ọ na-agụnye a compound akpọ queen anu acid, nke na-eme nnyocha na-enyocha, na nke a na-eche na-isi ihe na-enwogha nkịtị mmanụ aṅụ anu n'ime nwunye eze.
Nlekọta anụ ahụ. Royal jelii nwere ike dị na ụfọdụ Nde mma na ngwaahịa n'ihi na ọ pụrụ inye aka chebe anụ anyanwụ. Ọ pụrụ ọbụna idozi ụfọdụ nke mmebi ama mere site anyanwụ, tinyere Iweghachi collagen ma mbenata nọchiri ihu aja aja tụrụ.
Cholesterol. Dị ka ma na mmanụ aṅụ na anu pollen, ewe eze jelii e gosiri n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị si ọma na ihe ọjọọ cholesterol ke iyịp.
Anti-akpụ Njirimara. Ụfọdụ ọmụmụ gosiri na eze jelii, mgbe agbara n'ime cancer mkpụrụ ndụ, nwere ike jiri uto nke etuto ahụ.
Omumu ike. Ụfọdụ na-akwado echiche nke eze jelii-ekwu na ọ nwere ike melite a nwaanyị ọmụmụ na ọbụna relive mgbaàmà nke PMS.
Digestive ahụ ike. Royal jelii na-mara na-enwe ike dajụọ mmụọ a ọnụ ọgụgụ nke afo ọnọdụ si ọnyá na afọ mgbu na afọ ntachi.
Ọzọ Bee Products
Raw, organic, na unprocessed mmanụ aṅụ, anu pollen, na eze jelii bụ niile dịtụ mfe ịchọta ọkacha mmasị gị ahụ ike ụlọ ahịa, ma ọ bụ mma ma, a local beekeeper. E nwere ihe ole na ole ndị ọzọ na ngwaahịa mere site aṅụ na ekwo Ekwo na-adịghị dị ka mma na-amụ na ndị na-ekwesịghị ka mfe na-aka gị na. Propolis, ihe atụ, bụ resinous ihe onwunwe na aṅụ ka si sap na nke ha na-eji mechie obere cracks na n'oghere ekwo Ekwo.
Maka ụmụ mmadụ, propolis nwere ike ji mee Nde ngwa. Ọ bụghị a ekwukwa n'akwụkwọ nri ngwaahịa, ọ bụ ezie na ọ ga-eji mee ka ịta chịngọm. Propolis nwere antibacterial Njirimara na dịwo ji dị ka a Nde usọbọ maka ọnyá, otutu, na akpụkpọ rashes. Limited anya negosi na ya nwekwara ike inye aka na-emeso herpes, ezé na-efe efe, na mkpali oria. The àmà bụghị kwuo, ma propolis bụ nchebe iji.
Mgbá aṅụ bụ ọdụdụ umi na aṅụ na-eji eme ka elu nnukwu ha mmanụ aṅụ combs. Ọ bụghị oriri, nke pụtara na ọ bụ ihe siri ike mgbari. Ọ bụghị nsi, ma ị gaghị na-ukwuu oriri na-edozi nke ya ma ọ bụrụ na ị na-agbalị na-eri ya. Gịnị ọ dị mma ka a na-eme ka obi ihe ntecha, ncha, creams, na kandụl.
Iji Bee Products na smoothies
Honey, anu pollen, na eze jelii nwere ike niile-atụkwasịkwara gị smoothies. The oké ihe banyere anu pollen na mmanụ aṅụ bụ na ha nụrụ ụtọ oké nakwa dị ka na-enye gị dị ebube ike uru. Bee pollen abụghị ụtọ dị ka mmanụ aṅụ, ma ọ na-eme nwere ọmarịcha flavor. Ọ bụ a ọgaranya nri, n'ihi ya ịme ya nwayọọ nwayọọ. Malite na a ole na ole mkpụrụ n'oge na-eji nwayọọ nwayọọ dịkwuo ego ị na-eji n'etiti otu teaspoon na otu tablespoon kwa smoothie. Gbalịa agakọ anu pollen n'ime gị smoothies na ifesa on top ka sprinkles na ice ude. N'ihi na ihe niile nke m smoothie Ezi ntụziaka featuring anu pollen, pịa njikọ n'okpuru.
Ị nwere ike tinye mmanụ aṅụ ugboro gị smoothies na ebe nke ọ bụla ọzọ sweetener ị pụrụ iji. Ọ lụọ nwunye ọma niile ndị ọzọ flavors, ma nwekwara ike na-enwu na ya. Mgbe anya maka organic na nke ndu na mmanụ aṅụ na ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ a ngwaahịa mere na mpaghara, na nke ahụ bụ ọbụna mma. Lelee gị kacha nso ọrụ ugbo ji ahịa a local mmanụ aṅụ.
The flavor nke eze jelii na-adịghị amasị onye ọ bụla. O nwere ike ịbụ tart, na dị ka ụfọdụ na-akọwa ya, a obere fishy. The ozi ọma bụ na gị na mkpa a obere bit nke ya (banyere a teaspoon kwa smoothie) iji na-enweta ike uru na i nwere ike ikpuchi ya na gị smoothie na ike flavors. N'ezie, na-agbalị pairing ya na mmanụ aṅụ na-ezo ezo na flavor.
Bee na ngwaahịa ndị dị ịrịba ama maka nri na-edozi ọdịnaya na ike ịgwọ mmadụ na a n'ọtụtụ ụzọ. Always-akọ mgbe iji ngwaahịa ndị a ma ọ bụrụ na ị na-asọ aṅụ ma ọ bụ na-eche na ị na pụrụ ịbụ. Mgbe obere, ọ bụrụ na ị na-asọ anu-agba agba, ọ bụla otu n'ime anu ngwaahịa nwere ike ime ka ị na-enwe a bụ mmeghachi omume dị ka mma.
Gịnị bụ gị ahụmahụ na anu na ngwaahịa? Ị nwere a mmasị? Biko gwa site ahapụ a comment n'okpuru.
Post oge: Dec-13-2016
Faksị: 0086 574 87897189